2 years, 5 months ago 8651 Qoodi
Sadaasa 21/2012 hoggantoota paartii badhaadhinaa erga walii mallatteessan booda MM Dr Abiyyi Ahimad haasaa taasisaniin, maqaa osoo hin dhahiin obbo Lammaa Magarsaa fi namoota walitti baquu kana mormaa jiraniif deebii laataniiru.
"ADWUIn dhaaba dhukkubsataa ture, buuphaa (dhaaba ADWUI) kana otoo dafnee hin cabsinee ta'ee lubbuu hin horu ture" jedhaniiru.
"Namoonni miira fi hawwiidhaan oofaman yaada addaa dhiyeessu danda'u. Nuti badhaadhinoota beekumsa fi dhugaa qabachuun hawwii fi miira hir'isuu qabna. Siyaasa Ityoophiyaa keessatti hawwii duwwaa fi miira seera hin qabne rakkoo uumaa jira." jechuuis dubbataniiru.
"Paartiin badhaadhinaa kun hegeree biyya ajaa'ibdu kana (Ityoophiyaa) sirreessuufi miidhagsuuf beekumsaan kan hundaa'edha. Namoota har'a qeeqaa jira, bor waan amma murteessine sirri akka ture ni hubatu" jedhan.
Akkasumas paartiilee fi namoota paartii badhaadhinaatti makamuuf barbaadan adeemsa paartichaan yoo amanan yeroo barbaadanitti makamuu akka danda'an waamicha dhiyeessaniiru.
Walitti makamiichi ABUT (TPLF) dabalatee obbo Lammaa Magarsaatin heddu qeeqamuun isaa ni yaadatamaa. Obbo Lammaan, "walitti makamichi sirri miti, yoo sirri ta'ees yeroon isaa amma miti. Amma yoo hojiirra oole balaa guddaa fidaa" jechuun qeequun isaani ni beekama.
July 30, 2020, 2:09 p.m.
Siyaasa Itoophiyaa: ‘Osoo ofii hin hidhamiin, hin du’iin aangoo hin yaadinaa’ – Abiy Ahimad
May 7, 2020, 4:25 p.m.